Amaphoyisa agasele ehhotela ezotakula oNgqongqoshe ababili beKhabhinethi | Scrolla Izindaba
Amaphoyisa agasele ehhotela ezotakula oNgqongqoshe ababili beKhabhinethi
Omakadebebona be-MK abebenganeme bathumbe uNgqongqoshe wezokuVikela uThandi Modise, iphini lakhe uThabang Makwetla kanye noNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli uMondli Gungubele ngoLwesine ebusuku – kwadingeka amaphoyisa aqavile ukuba agasele ehhotela lasePitoli ukuze abatakule.
Kusetshenziswa ama-stun grenade, i-Special Task Force kudingeke yephule i-St George’s Conference Centre e-Irene ngemuva kokuthi omakadebebona ababethukuthele bathumbe oNgqongqoshe beKhabhinethi.
Lesi sigameko siqale ngehora lesikhombisa ebusuku ngenkathi omakadebebona befuna ukubona uMengameli uCyril Ramaphosa nePhini likaMengameli uDavid Mabuza.
Okhulumela i-NatJoints, uBrigadier Vish Naidoo uthe kuboshwe abantu abangama-56.
“Ngemuva kokuthi imizamo yokuxoxisana nabathumbi ingaphumeleli, amaphoyisa asebenzise indlela yamasu futhi ahlenga abathunjiwe ngempumelelo. Akuzange kube khona ukudutshulwa kwezibhamu ngesikhathi sokutakula,” kusho uNaidoo.
Sekungokwesibili kuleli sonto ukuthi ababengamasosha abathukuthele bezame ukuthola ukunakwa ubuholi be-ANC.
NgoLwesithathu iqembu ebelizibiza nge-Leberation Struggle War Veterans ligasele eLuthuli House eGoli. Leli qembu lalabo ababengamasosha belilala emahhovisi e-ANC kusukela ngempelasonto. Bafuna izigidi eziyi-R2.2 umuntu ngamunye ngeminyaka yabo yokusebenza ngesikhathi somzabalazo wokulwa nobandlululo.
NgoLwesine ebusuku, umholi waleli qembu uLwazi Mzobe uthe bekungeyona into ebabazekayo njengoba kwenza amaphoyisa. Ngesikhathi amaphoyisa ehlasela isikhungo senkomfa, amasosha “ebelinde noNgqongqoshe,” etshela i-News24.
“Sonke besilele phansi. Bathe bayasibopha sonke”.
UGungubele, ongumngani oqinile kaRamaphosa, uthe yena noModise “beluleke abavikeli ukuthi bangenzi lutho ngoba bekukhona inhlanganisela yabantu”.
“Abavikeli bethu bebengenakwenza lutho ngoba bekuzokwenza izinto zibe zimbi kakhulu,” kusho uGungubele etshela i-News24.
Leli qembu lakhiwe yilabo ababengamalungu oMkhonto weSizwe Military Veterans ‘Association, i-Pan Africanist Congress’ Azanian People’s Liberation Army (i-APLA) kanye ne-Azapo’s Azanian National Liberation Army (i-Azanla).
UNaidoo uthe: “Kuboshwe okungenani abantu abangama-56, kuhlanganisa nabesifazane abayisikhombisa kanti kungenzeka okungenani babhekane namacala amathathu okuthumba”.
Abasolwa bathathiwe bayohlolwa udokotela ngemuva kokukhononda ngezinhlungu, engeza.
Umthombo wesithombe: i-St. George Hotel